စံပြပုဂ္ဂိုလ်များကို ဂုဏ်ပြုခြင်းက CPC အား ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် တွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တော်၊ ပြည်သူ့ခန်းမကြီးတွင် July 1 ဆုတံဆိပ် ရရှိသူများအား ဂုဏ်ပြုပန်းစည်းများ ပေးအပ်ကာ အလေးပြုနေကြသော တရုတ် ရှေ့ဆောင်လူငယ်များ အဖွဲ့ဝင် ကလေးငယ်များအား ဇွန် ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတနှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ဇွန် ၃၀ ရက်က CPC အဖွဲ့ဝင် စံပြပုဂ္ဂိုလ်များကို ပါတီ၏ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ပြုဆုဖြစ်သော July 1 ဆုတံဆိပ် (July 1 Medal) အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အရေးပါသော မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ် Hengshui မြို့၊ Fucheng ကောင်တီ၊ Qianzhuanmen ကျေးရွာရှိ လယ်ကွင်းများတွင် ဂျုံများ ရိတ်သိမ်းနေသော လယ်သမားတစ်ဦးအား ဇွန် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှီ၏ မိန့်ခွန်းသည် CPC က အောင်မြင်မှုအသစ်များ ဖော်ဆောင်ရာတွင် တရုတ်ပြည်သူများကို ဦးဆောင်ရန် နောက်ထပ်စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပလေ့လာသူများက ပြောခဲ့သည်။
CPC သည် ပြည်သူ့ဗဟိုပြု ပါတီ အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ကာလရှည်ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်း၊ CPC က တူညီသောလမ်းကြောင်းဆီသို့ အတူတကွ ချီတက်ရာတွင် တရုတ်ပြည်သူများအား စည်းလုံးမှုရှိကြရန် စီမံထိန်းကျောင်းခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် ယူကရိန်းနိုင်ငံ အနိုင်ရပါတီ Servant of the People faction ၏ ခေါင်းဆောင် David Arakhamia က ပြောခဲ့သည်။
ဆုတံဆိပ်လက်ခံရရှိသူများသည် CPC ၏ ပြည်သူ့ဗဟိုပြုတန်ဖိုးများကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး သယ်ဆောင်ပေးသူများဖြစ်ကြောင်း၊ CPC သည် ပြည်သူသာလျှင် ပထမအဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိသဖြင့် အကြောင်းပြချက်တိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ယုံကြည်မှုရှိစေကြောင်း ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Faruk Boric က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အာရှ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုလေ့လာရေးစင်တာ ဥက္ကဋ္ဌ Bambang Suryono ကလည်း ဆုတံဆိပ် လက်ခံရရှိသူများစွာသည် ပါတီနှင့် ပြည်သူအတွက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြောင်း ၊ထို့ပြင် ဟန်ဂေရီ အလုပ်သမားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ Gyula Thurmer က CPC သည် ပြည်သူသာလျှင် ပထမဟူသော စည်းမျဉ်းကို ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိကြောင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှု ရရှိထားပြီးသော အခြေခံ ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် ပြည်သူများက စိတ်ပါလက်ပါ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
CPC ၏ ခိုင်မာသော ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားသစ်လောင်းမှု အိပ်မက်ကို တရုတ်ပြည်သူများအား နားလည်သဘောပေါက်စေမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် ပိုမိုပျော်ရွှင်သော ဘဝဖြင့် နေထိုင်သွားလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းလည်း Thurmer က ဆိုသည်။ (Xinhua)
World Insights: Honoring role models to encourage CPC for greater success: experts
Source: Xinhua| 2021-07-01 09:48:56|Editor: huaxia
BEIJING, July 1 (Xinhua) — Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, on Tuesday conferred the July 1 Medal, the Party’s highest honor, on model CPC members, and made an important speech.
Overseas observers have said that Xi’s speech will further inspire the CPC to lead the Chinese people in making new achievements.
The CPC is indeedapeople-centered party, said David Arakhamia, leader of the ruling Servant of the People faction of Ukraine, noting that by setting long-term goals, the CPC has managed to unite the Chinese people in marching towards the same direction together.
The medal recipients embody and convey the people-centered values of the CPC, said Faruk Boric, an expert on China from Bosnia and Herzegovina, adding that there is every reason to be confident about China’s future as the CPC will continue to put the people first.
Bambang Suryono, chairman of Indonesia’s Asia Innovation Study Center, noticed that many of the medal recipients are ordinary Party members who have made outstanding contributions to and sacrifices for the Party and the people.
The awarding of this medal is of great significance, as it will help inspire more ordinary Party members to devote their lives to the cause of the Party and the people, added the expert.
Gyula Thurmer, president of the Hungarian Workers’ Party, said the CPC upholds the principle of putting the people first and takes serving the people wholeheartedly as its fundamental purpose, which has won the support of the Chinese people.
Thurmer expressed belief that under the strong leadership of the CPC, the Chinese dream of national rejuvenation will be realized and the Chinese people will liveahappier life. ■
Photo : 1 – A group of children, who are members of the Chinese Young Pioneers, present flowers to recipients of the July 1 Medal and salute them at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, June 29, 2021. (Xinhua/Gao Jie)
2 – A farmer harvests wheat in the fields of Qianzhuanmen Village, Fucheng County, Hengshui City, north China’s Hebei Province, June 13, 2021. (Xinhua/Zhu Xudong)